Ulo ahia gi adighi adi dika i chere | Martech Zone
Tuesday, October 22, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otutu ndi mmadu amataghi oke nke nchịkọta na nyiwe ahia na ntule pụrụ iche ndị ọbịa. Imirikiti nyiwe ndị a na-atụle onye ọbịa site na ịtụkwasị a kuki, obere faịlụ a na-ezo aka na oge ọ bụla onye ọbịa bịara na saịtị ahụ site na iji otu ihe nchọgharị ahụ. Nsogbu a bụ na m nwere ike ghara ịleleta saịtị gị site na otu ihe nchọgharị ahụ… ma ọ bụ na m nwere ike ihichapụ kuki m.
Ọ bụrụ na m gaa na saịtị gị na ekwentị mkpanaaka m, mbadamba, laptọọpụ na desktọọpụ… M nnọọ ghọrọ 4 pụrụ iche ọbịa. Ọ bụrụ na m kpochapụrụ kuki m ugboro ole na ole wee laghachi na saịtị gị, abụrụ m onye ọbịa pụrụ iche karị. MediaMind na-eji usoro a kpọrọ onye ọbịa pụrụ iche gbanwere agbanwe ma kọwaa ya na vidiyo a - na-etinye usoro mgbanwe algorithm nke ndị na-ege gị ntị. Ha na-akọwa akụkọ banyere ndị ọbịa pụrụ iche ebe a:
Nsogbu a abụghị nanị na nke gị nchịkọta, ọ bụ ezie. Ọ na-emetụta ọkaibe ịre ahịa n'ịntanetị ọkaibe nke na-agbaso omume onye ọbịa na omume igwe mmadụ n'oge oge. ComScore na-ebu amụma nhichapụ kuki dị ka nsogbu ka ukwuu. Site comScore, ezubere iche ziri ezi site na iji kuki (% nke ngosipụta ewepụtara n'ụzọ ziri ezi):
70% maka 1 ngosi (dịka ụmụ nwanyị)
48% maka ngosi 2 (dịka ụmụ nwanyị gbara afọ 18-34)
11% maka ngosi 3 (dịka ụmụ nwanyị gbara afọ 18-34 na ụmụaka)
36% maka ichebe omume
Nke a apụtaghị na ị ga-eleda gị anya nchịkọta ma ọ bụ ahịa ahịa akpaaka gị. Ọ bụ naanị okwu ịdọ aka ná ntị na ịdabere na usoro mkpesa dị ka nke a. Maka ndị na-ere ahịa, nke a bụ ebe nyiwe nwere njikọ ndị ọzọ na njikọta nwere ike ịlele ndị ọbịa gị nke ọma na usoro na nnọkọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka onye ọbịa gị banye na weebụ, na ngwa mkpanaka gị, ma ọ bụ interface ọ bụla ọzọ - ị nwere ike ịlele ndị ọbịa ahụ nke ọma ma dozie ọnụ ọgụgụ nke eziokwu pụrụ iche ọbịa.
Ozi na-ewu ewu dị mkpa karịa ka ị na-eji metrik ndị a. Oke nke njehie n'ofe ndị na-ajụ ase agaghị agbanwe n'ụzọ dị egwu - yabụ karịa oge ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa gị pụrụ iche na-agbago elu, mgbe ahụ ị na-eme ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ha abụghị, ikekwe ị nwere ọrụ ị ga-arụ.
Tags: gbanwee onye ọbịa pụrụ ichemezieokpuNdị ọbịa pụrụ ichenleta esenowondị ọbịa
Ahịa ahịa na Ahịa Ahịa
Ọkt 23, 2013 na 9:49 AM
Daalụ maka ịkekọrịta Doug! Ọ bụ n'ezie ezigbo ọgụgụ ma mee ka m chee! ..
Jan 4, 2014 na 5: 19 AM
nyfv N’oge na-adịbeghị anya, akwụrụ m ụgwọ na ego na ụgwọ na-eri m n'akụkụ niile. nke ahụ bụ ruo mgbe m mụtara ịkpata ego .. na INTERNET. Agara m netwọọdụ na-eme nchọpụta, ma bido na-ejuputa nyocha maka ego, na n'ezie, enwere m ike ị nweta ike ị nweta ego !! Obi dị m ụtọ na m mere nke a .. mKBu